Fiarovana sy toro-hevitra
Tsy tokony hampataotra
SUJET: Lasa fahazarana
Lasa fahazarana Il y a 6 Taona Karma: 0
Mety ho mapiome antsika anefa hitako nahasoa ahy a!
Hatramin'izay nanombohako nanao firaisana izay, dia nampiasa fimailo foana ny tenako. Ny ahy moa izany tsy ny hisoroana ny aretina no tanjona fa mba fitiavana mampiasa fimailo. Izay no nahatonga ahy nampiasa an'io foana. Tsy nanelingelina ahy fa dia am le oui tsara e!
Hitsambikina avy hatrany any amin'ny :Ndao, ento ny resakao!!!... MSM...... Fivavahana...... Fomban-drazana...... Fiainana amin'ny ankabobeny...... Resaka tsy voa sokajy... Firaisana & fiarovana...... Resaka manodidina ny SEXE......... Passif ou actif...... Fiarovana sy toro-hevitra... Vaovao samihafa...... Vaovao eto an-toerana......... Ny MSM sy ny firenena...... Vaovao maneran-tany......... Mister Gay... Fandrosoana...... MSM sy ny informatique......... Toro-hevitra informatique...... Haingo, bika, mozika,sns…......... Isika!!!!......... Fikarakarana ny tarehy...... Resaka hafa mihitsy manodidina ny fandrosoana......... Dihy... Zo sy Lalàna...... Zonao fa tsy angano angano...... Allo fanantenana... IST- VIH...... Aretina tsy misomonga!!!!...... Fakana RA...... Maimaimpoana...... VIH...... Fampiofanana